Kusukela namhlanje, sibonga i-Digital Signature ene-OTP, ukukhetha iTrovaWeb kulula kakhulu
Isiginesha yedijithali ene-OTP isisondeza nakakhulu kumakhasimende ethu
La isiginesha yedijithali ekude ngokuziphatha I-OTP kungenye yezinto ezintsha zakamuva ezilethwe iwebhu nezwe eliku-inthanethi. Ithuthukisa isikhathi nezinsizakusebenza, isheshisa izinqubo zokuphatha futhi iqinisekisa ukuba semthethweni okufanayo ne- isignesha. Kusukela namuhla, futhi I-TrovaWeb inikeza lokhu kungenzeka kumakhasimende ayo ukusondela ezidingweni zakho nsuku zonke.
La isiginesha ekude yisixazululo esisebenza kahle esihlongozwa ngu- zamazwe ngamazwe nezinkampani ezinkulu ukusheshisa imikhuba yokubhala phansi izinkontileka nezivumelwano zamabanga. Ngenxa yobuchwepheshe be-OTP, i-One-Time Password, noma ngubani uyakwazi ukusayina kude izicelo zokusebenzisa izinsizakalo, izinkontileka nokusebenzisana. Ngokusebenza okusemthethweni okufanayo nesiginesha ebhalwe ngesandla.
Sayina nge-OTP: ITrovaWeb ihlala njalo ihamba phambili emisha
Ilalele njalo ubuchwepheshe bamuva futhi ihlale ilangazelela ukwenza impilo ibe lula kumakhasimende ayo, I-TrovaWeb kusebenze kungenzeka kwe Isiginesha yedijithali ngokuziphatha I-OTP. Le yinqubo esheshayo nelula evumela ukuthi wena sayina ngamadijithi noma iyiphi incwadi kagesi. Ubuqiniso buyafana nobomunye isignesha, induduzo ibonakala kakhulu. Ngenxa yokusebenza kwe- Isiginesha ye-Digital Remote, zonke izinkontileka nezivumelwano eziphakanyiswe ngu I-TrovaWeb ezinkampanini, amabhizinisi amancane naphakathi, abathengisi kanye nochwepheshe, manje sebengabhaliswa kusukela ekunethezeka kwasekhaya.
Ukuba lula kwewebhu, inani elifanayo elisemthethweni lesiginesha ebhalwe ngesandla
Ukusayina idokhumenti ukude kulula kakhulu nge Imodi ye-One-Time Password: kwanele ukuba ne-smartphone lapho i iphasiwedi yesikhashana bese ufaka leli phasiwedi lapho usayina. Ngale ndlela uzokwaziswa futhi uqinisekiswe uhlelo ngendlela eyingqayizivele nengaphikiseki. Lapho isiginesha ekude izokongela isikhathi nezinsizakusebenza, kepha ngaphezu kwakho konke izokuvumela ukuthi ubhalisele kuzo zonke izinsizakalo ezilula nezintsha ezinikezwa yi Umjikelezo Wokuhlelwa Wokuthola kweWebhu.
Ukushesha nokuba semthethweni okuhambisana: neTrovaWeb OTP Digital Signature kungenzeka
Nge isiginesha yedijithali ekude asisekho isidingo sokuphatha noma yini Ithokheni noma idivayisi ebonakalayo ngaphandle kwe-smartphone yakho. Konke okudingayo i-OTP ethunyelwe kwiselula yakho kanye nesoftware yesiginesha ukukhetha idokhumenti bese usebenzisa isiginesha yakho yedijithali. Ngefayela le- ngena ngemvume ku-OTP inikwe amandla yiTrovaWeb, empeleni, kungenzeka ukuthi usayine futhi uqinisekise izinkontileka nemibhalo usebenzisa amaphasiwedi wesikhashana, ama-OTP, esizokuthumela wona nge-SMS ngqo kwi-smartphone yakho. I- Iphasiwedi Yesikhathi Esinye ukulala amaphasiwedi ashukumisayo, okungukuthi, ephelelwa yisikhathi ngemuva kwesikhathi esifushane. Ngakho-ke, zimelela uhlelo oluphephe kunazo zonke lokuthola amasistimu e-IT futhi, ngaphezu kwakho konke, zikuvumela ukuthi ufake isiginesha yedijithali ekuhambeni. Ngokwenza isignesha yedijithali isebenze, I-TrovaWeb ukhombisa futhi ukunaka kwakhe njalo ubuchwepheshe bezobuchwepheshe nokusondela kwayo ngokugcwele kuzidingo zamakhasimende.
Tags: emisha kwezobuchwepheshe Izindaba thola